Xiaomi သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရက် ၃၀ ရှိသောအားကစားကိုအာရုံစိုက်သည့်စမတ်နာရီတစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်လိုက်သည် Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | စမတ်နာရီ, Xiaomi က
အာရှကုမ္ပဏီကြီး Xiaomi သည်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုဤလောကမှပုံပေါ်သောနှုန်းဖြင့်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။ သူ၏နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်မှာ smartwatch ဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အားကစားကိုအဓိကထားပြီးအဓိကဆွဲဆောင်မှုများမှာအာရုံစူးစိုက်ထားသောတစ်ခုထက်ပိုသောအသံနှင့်တူလိမ့်မည်။ အထိ 30 ရက်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့်အစဉ်အမြဲအဖြစ်, သင်၏ စျေးနှုန်းအကြောင်းအရာ.
၎င်း၏တရားဝင်အမည်ဖြစ်ပါတယ် Xiaomi WeLoop ဟေ့ 3S တကယ်တော့မှာ Smartwatch တစ်ခုထက်ပိုပြီး၎င်းသည် applications များကိုသူ့ဟာသူလည်ပတ်နိုင်သည့် operating system ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည် quantifying device တစ်ခုဖြစ်သည်အနည်းဆုံးအဖြစ်ဝေးငါတို့သိအဖြစ်။
1 မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှစိတ်မဝင်စားသောအလောင်းအစား
1.1 ဒါက Xiaomi Weloop Hey 3s ပါ
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှစိတ်မဝင်စားသောအလောင်းအစား
El Xiaomi WeLoop ဟေ့ 3S ရုံဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Apple Watch Nike + ၏ပြောင်မြောက်သောကော်ပီတစ်ခုအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသည့်ဝေဖန်မှုများကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အမှန်မှာတူညီမှုကိုငြင်း။ မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်မတူညီသောထုတ်ကုန်များ ဖြစ်၍ ၎င်း၏သိုင်းကြိုးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဝတ်ဆင်နိုင်သော Amazfit နှင့်ဆင်တူစွာပင်ဆင်တူပါသည်။
Xiaomi Weloop ဟေ့ 3s
ငါပြောတာကဒီထုတ်ကုန်တွေဟာ ( Watch Nike + နဲ့ပတ်သက်ပြီး) ကွဲပြားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Xiaomi Weloop Hey 3s အသစ်ဟာစမတ်နာရီတစ်လုံးမဟုတ်ဘူး၊ smartwatch-shaped quantizer လက်ကောက်။ Xiaomi Weloop Hey 3s သည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သော ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြင်ပန်းအသွင်အပြင် မှလွဲ၍ မည်သည့်စမတ်နာရီထက်မဆိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့် Amazfit နှင့် Xiaomi Mi Band တို့နှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ထို့ကြောင့်အကျိုးအမြတ်အတွက်ဖြစ်စေစျေးနှုန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဆင်တူခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေအထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးအတွက်ဖြစ်စေဖြစ်စေသေချာသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Xiaomi Weloop Hey 3s သည်မည်သူ့ကိုမျှစိတ်မဝင်စားစေမည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်.
ဒါက Xiaomi Weloop Hey 3s ပါ
သံသယမရှိဘဲ, အငြင်းပွားဖွယ်ရာဘေးဖယ်ထားခဲ့ပါ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည် သုံးစွဲသူရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာပါအထူးသဖြင့်ဝတ်ဆင်နိုင်သော Xiaomi Weloop Hey 3s တွင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်လက္ခဏာနှစ်ခုရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှ orientedသင်ဟာအားကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အနည်းဆုံးတော့သင်ဟာနည်းနည်းလေးပိုပြောင်းပြီးခြေရာခံချင်တယ်ဆိုရင်။
ဤချဉ်းကပ်မှုရှိလင့်ကစား Xiaomi Weloop Hey 3s တွင် အသိပေးချက်များပျောက်ဆုံးနေမည်မဟုတ်ပါ သင်၏စမတ်ဖုန်း၊ Twitter, Facebook စသည့်စမတ်ဖုန်းများမှပုံမှန်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ၎င်းနှင့်ဝတ်ဆင်နိုင်သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုဘက်ထရီကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ရပ်ဆိုင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးသည်။
Xiaomi Weloop Hey 3s သည်သက်ဆိုင်ရာ application တစ်ခုမှတဆင့်အလုပ်လုပ်သည် Android, iOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်.
ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်တစ်ခုသာရှိသော်လည်း၎င်းသည် Apple Watch နှင့်အလွန်တူညီကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကြိုးကြိုးကိုဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအမှု၌က ၁.၂၈ လက်မအရွယ် touchscreen သည် ၁၇၆ x ၁၇၆ pixel resolution ရှိပြီး Corning Gorilla Glass 1,28 ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်.
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ရပါလိမ့်မယ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အရေခွံများသို့မဟုတ်လက်ပတ်နာရီများကိုများစွာသော မင်းရဲ့အသွင်အပြင်
အတွင်းပိုင်းကျွန်တော်တစ် ဦး ရှာပါ 9-axis motion sensor, gyroscope, accelerometer, GPS ... ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူ Xiaomi Weloop Hey 3s ကကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အဆင့်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားခဲ့သည့်အကွာအဝေး၊ ကျွန်ုပ်တို့မီးရှို့ခဲ့သောကယ်လိုရီများနှင့်အခြားအရာများနှင့်ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုကိုပေးသည်ကိုမမေ့နိုင်ပါ ဘလူးတုသ် ၅.၀ BLE၊ WiFi ခ / g / n၊ ဘက်ထရီ ရက်ပေါင်း 30 အထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဲဒါဟုတ်ပါတယ် ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေခံနိုင်ရည်ရှိသည် IP67 အသိအမှတ်ပြုထား
ငါပြောခဲ့သလိုပဲနောက်ထပ်ကြယ်ပွင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများက Mi Band2နှင့်မတူဘဲ Xiaomi Weloop Hey 3s ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုအဆက်မပြတ်တိုင်းတာနိုင်သည်နှင့်တိကျသောအချိန်လေးမှာသာ။
သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အတိုင်း Xiaomi Weloop Hey 3s သည်နိုင်ငံတကာမှတင်သွင်းသူများနှင့်ရောင်းချသူများမှတစ်ဆင့်တရား ၀ င်ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ အချို့သောစပိန်စတိုးဆိုင်မှာအရောင်းသုံးမျိုးနဲ့ကြိုတင်ရောင်းပြီးပြီ အနီရောင်၊ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်၏စျေးနှုန်းမှာ 119 ယူရို, သောစေသည် အများဆုံးပြီးပြည့်စုံသောနှင့်ချွေတာတဲ့ရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခု.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi သည်ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိသောအားကစားကိုအာရုံစိုက်သည့်စမတ်နာရီတစ်လုံးကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Kev Cr ဟုသူကပြောသည်
Rodolfo Morales placeholder ပုံရိပ်
Kev Cr အားပြန်ပြောပါ
Rodolfo Morales placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
သူက level level Don Kev ကိုမြင်တယ်။
Rodolfo Morales အားပြန်ပြောပါ